जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसलाप्रति बाबुरामको आक्रोश - DURBAR TIMES
HomeNewsजसपा विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसलाप्रति बाबुरामको आक्रोश
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जसपा विवादबारे निर्वाचन आयोगको फैसलाप्रति आक्रोश पोखेका छन् । निर्वाचन आयोगले अल्पमतमा रहेको जसपा अध्यक्ष ठाकुर पक्षलाई बहुमत जुटाउन लामो समय दिएपछि पनि हस्ताक्षर जुटाउन नसकेपछि जसपाको दुवै पक्षले गरेका कारबाहीको निर्णय अमान्य रहेको बताएको थियो ।
जसपाभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर दुवैले एकआपसलाई कारबाही गरेका थिए । संसद विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा र पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्ष अल्पमतमा रहेको छ ।
आइतबार आयोगले दुवैको निर्णय वैधानिक नभएको भन्दै कसैको कारबाहीलाई मान्यता दिन नसिकने निर्णय सुनाएको थियो ।
भट्टराईले सोमबार एक ट्वीट सन्देशमा आयोगको नाम नलिई उक्त निर्णयप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरकेा हुन् । उनले आयोगको फैसलालाई खड्गप्रसाद एण्ड कम्पनीको नयाँ विधि शास्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आफूहरुले चोरीको विरुद्धमा आयोगमा उजुरी दिएको तर चोरहरुले आफैँ प्रतिवाद गर्दै अर्को उजुरी दिएपछि आयोगले गलत निर्णय गरेको उनको तर्क छ । आयोगले जसपाको विवादमा दुवै वादी र प्रतिवादी चोर हुन्, मिलेर बस्नू भन्ने फैसला गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘खड्गप्रसाद एण्ड कम्पनीको नयकका विधिशास्त्रः कसैले चोर्‍यो भने चोरी गर्नेको विरूद्ध मुद्दा हाल्नू! चोरलाई पनि मैले चोरेको हैन, उल्टै मुद्दा हाल्ने (वादी)ले चोरेको हो भनेर प्रतिवाद गर्न लगाउनू। मुद्दा हेर्ने कार्यालयले दुवै वादी र प्रतिवादी चोर हुन्, मिलेर बस्नू भन्ने फैसला गर्नू! वाह!’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
भट्टराईले वादी र प्रतिवादी दुबैलाई मिलेर बस्न भन्ने आयोगको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इशारामा भएको हुनसक्ने आशंका पनि गरेका छन् ।
Previous articleदाउन्नेको एउटै फार्ममा तीन लाख कुखुरा
Next articleपूर्वप्रधानमन्त्री खनाल अस्पताल भर्ना